Semalt: Ny fangatahana fanodinkodinana mahazatra indrindra
Mitombo isanandro isan'andro ny fangalarana amin'ny fisiahana amin'ny aterineto satria maro ireo orinasa mampiasa Hafatra betsaka ho an'ny tanjona samihafa. Fikambanana samihafa sy olona manana fahasamihafana isan-karazany . Raha ny marina, amin'izao fotoana izao dia misy ny karazana fandinganana tsy misy fetran-tsasatra. Mba hampisehoana ny maha-zava-dehibe ny fanangonana ny fampahalalam-baovao, 7 ny fampiasana fangalana angon-drakitra indrindra ampiasaina dia asongadina etsy ambany.
1. Data Collection avy amin'ny tahiry PDF
Ity fangatahana ity dia ny fanangonana angon-drakitra sasany avy amin'ny rakitra PDF ary ny fampivoarana azy io ho fampirobana ny rakitra. Ny tahiry antonon-tsarimihetsika tsirairay dia misy kaonty 15 ka hatramin'ny 20 eo amin'ny pejy 5 ka hatramin'ny 15.
2. Fitaovana fampahalalana amin'ny alalan'ny milina fikarohana sy ny torolàlana an-tserasera
Izany dia fiaraha-mikirakira ny angon-drakitra mahazatra. Mitaky angona angon-drakitra avy amin'ny milina fikarohana sy ny torolàlana an-tserasera izany ary miditra ao anaty tahiry voatondro.
3. Ny mailaka dia maneho ny fikambanana sy ny fanamarinana
. Ny fangatahana fangalana ny angon-drakitra dia mitaky adiresy mailaka, anaran'ny orinasa, laharan-telefaona, fanjakana, ary ny tanàna izay misy ity orin'ity orinasa ity. Izany karazana fampahalalana izany matetika dia ilaina amin'ny tanjon'ny marketing. Tokony hohamarinina ary voalamina ny fampahalalana mba hampiasaina mora foana. Ny lisitra feno amin'ny orinasa dia azo alaina mora foana avy amin'ny tolotra, fa ny fampahalalana maromaro dia azo avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny orinasa tsirairay.
4. Lisitry ny fifandraisana an-tariby
Ity tanjona ity dia ny fanangonana adiresy mailaka ho an'ireo olona manana fantsona Youtube. Azo ampiasaina hiara-miasa aminy izy ireo na hamokarana vokatra / serivisy ho azy ireo. Azo ampiasaina koa izany mba hanaovana fanadihadiana manan-danja.
5. Lisitry ny trano rehetra ao amin'ny toerana manokana
Ity fangatahana ity dia ampiasaina mba hahazoana ny lisitry ny trano fandraisam-bahiny amin'ny tranonkala manokana. Na dia manana lisitry ny trano fandraisam-bahiny amin'ny toerana maromaro aza ny vohikala kinendry, ireo izay ao amin'ny toerana manokana ihany no ilaina amin'ity fangatahana ity. Hatramin'ny 1400 hatramin'ny 1650 ny lisitry ny hofan-trano dia voatanisa ao amin'ny tranokala, ny olona voatery dia tokony hosivanina ary hikotika. Ho an'ny orinasa isan-tokony, ny antsipiriany takiana dia ny mari-pamantarana id, anarana, ary ny antsipiriany. Ny tahirin-kafatra rehetra dia tokony hozaraina ao anaty tahadika tsara tarehy araka ny voalazan'ny mpangataka.
6. Ny antsipiriany momba ny profesora momba ny fitantanam-bola any Etazonia
Ity fangatahana famindrana ity dia ny hikaroka any amin'ny tranokala any amin'ny oniversite rehetra any Etazonia mba haka ny adiresy mailaka sy ny laharan'ny finday mpampianatra momba ny vola.
7. Database an'ny mpivarotra fitaovam-piadiana UK
Ity tetikasan-drakitry ny tranonkala ity dia ny fametrahana ireo mpivarotra britanika matihanina izay miresaka manokana amin'ny marika Audi sy Nissan. Ho an'ny mpivarotra tsirairay dia ny antsipirihany dia ny laharan-telefaona, ny adiresy mailaka, ny adiresy mailaka, ny anaran'ny orinasa ary ny anaran'ny mpitantana.
Eo am-pamaranana, misy fanadihadiana an-jatony maro mipetraka. Ireo izay voatanisa etsy ambony dia nofidiana nofinofisina fotsiny ho an'ny tanjona ilazana fanoharana Source .